Mashiinka Roll sameynta, Kala & mashiinka CTL - Linbay
Cable saxaarad Roll la xirrira Machine
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dabka
Perfiladora de Bandeja La qaadi karo
Mashiinka Diyaarinta Strut Channel Roll
Qaabka loo yaqaan 'Din Rail Roll'
Kufsiga & Xarafka
Mashiinka Aasaasiga ah ee Warehouse Shelf Upright Rack Roll Machine
Mashiinka qaabaynta sanduuqa sanduuqa
Iridda & Daaqada
Mashiinka Mashiinka Diyaarinta Sili Rolling Shutter Slat
Mashiinka Qaabida Mashiinka Dusha ee Xarkaha
Mashiinka Mashiinka Qaabaynta
Mashiinka Qaabaynta Mashiinka Iridda / Daaqadda / Daaqada
Roll huwataa birta U samaynta Machine
B Deck Roll Mashiinka Samaynta
C Purlin Roll U samaynta Machine
Mashiinka Aasaasida ah ee 'Purlin Roll.'
Mashiinka Qaabaynta Sigma Purlin
Mashiinka Aruurinta CZ Purlin Roll
Mashiinka Aruurinta CZS Purlin Roll
Perfiladora de Polines Dhismayaasha
Light eeg Machine Steel Roll U samaynta
Qalabka Qaabaynta Qalabka "steel Silo Roll"
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Farshaxanka
Mashiinka samaynta ee duubaya Scaffold
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Xirmay
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah ee Dameerka
Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Xirmooyinka Dabaqa
Double Panel Lakabka duudduuban mashiinka la xirrira
Ridge Cap mashiinka duudduuban la xirrira
meesha biyomareenka Roll la xirrira Machine
Perfiladora de Canalone
Mashiinka Qaabida Mashiinka Duulista ee Downspout
Perfiladora de Canaletas Americans
Highway biraha ku giringiriya U samaynta Machine
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Xaraashka Waddada
Mashiinka Aruurinta Wadooyinka Wadada Uway
Mashiin Terminal Highway Guardrail
Mashiinka Aasaasiga ah ee Mire Wire Mesh Fence Post Roll
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Masawirka Scaffolding Plank
Dabaqa dabaqa TR80 mashiinka duudduuban la xirrira
Cz Purlin Roll U samaynta Machine
Mashiinka Aruurinta Muuqaalka C Profile
Mashiinka Aruurinta Tooska ah ee Tooska ah
Mashiinka Mashiinka Aasaasiga ah ee Diifka Rafka ah
Mashiinka Qaabaynta Xagasha
Mashiinka Aruurinta Dlr Roll
Sidee LINBAY MAKIINADDA u sameeyaa rakibidda inta lagu jiro COVID-19?
Ku rakibida mashiinka duubista duubista inta lagu jiro COVID-19 waa bilaash!
Halkan waxaa LINBAY ku sharxi doonaa sida aan u sameyno rakibidda makiinadeena duubista duubista.
Marka hore, waxaan ku hagaajineynaa mashiinka dhirteenna, waxaan ku weydiin doonaa cabirka aad soo saarayso marka hore, waxaan mashiinka ku dhejineynaa cabirka uu soo saari doono isla markaana waafajin doono dhammaan cabirrada saxda ah ka hor rarka, markaa uma baahnid inaad wax ka beddel markii aad heshay mashiinkan.
Ta labaad markaan mashiinka u kala furfuro qallajiska, waxaan u qaadnaa fiidiyowyo si aad u ogaato sida loogu xiro. Mashiin kasta wuxuu leeyahay fiidiyowgiisa. Fiidiyowga, wuxuu ku tusi doonaa sida loo xiro fiilooyinka iyo tuubooyinka, loo dhigo saliidaha, la isugu geeyo qaabdhismeedka jirka iwm.
Waa kan tusaale fiidiyowgaas: https://youtu.be/p4EdBkqgPVo
Ta saddexaad, markii aad hesho qalabka, waxaad yeelan doontaa kooxda wahtsapp ama weChat, injineerkeenna (Wuxuu ku hadlaa Ingiriisiga iyo Ruushka) aniga iyo (Anigu waxaan ku hadlaa Ingiriisiga iyo Isbaanishka) waxaan ku jiri doonnaa kooxda si aan kuu taageero wixii shaki ah.
Tan afraad, waxaan kuu soo diraynaa buug ku qoran af Ingiriis ama Isbaanish si aad u fahanto dhammaan macnaha badhamada iyo sida loo bilaabo mashiinka.
Waxaan haynaa kiis ah in macmiilkeyga ka yimid Vietnam uu helay mashiinkiisa bishii Nofeembar 25, oo uu saaray calaamadda habeenkii, oo uu bilaabay soo saarista bishii Nofeembar 26. Taas ka sokow, waxaan ku guuleysannay guulo badan oo ah rakibidda mashiinno aad u dhib badan. Wax dhibaato ah malahan rakibida mashiinkaaga. LINBAY waxay siisaa tayada ugu fiican iyo adeegga ugu fiican macaamiisheenna, gaar ahaan xaaladdan. Uma baahnid inaad sugto illaa iyo inta ay dhaafayso COVID. Waxaad ku soo saari kartaa astaamaha isla markiiba mashiinnadayada.
Truck Fender Roll U samaynta Machine
LINBAY-Dhoofinta la Máquina Perfiladora de...